Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Sahara Andrefana
Sahara Andrefana RSS
Tahiry isam-bolana Desambra 2010 1 Lahatsoratra Desambra 2009 1 Lahatsoratra Mey 2009 1 Lahatsoratra Febroary 2009 1 Lahatsoratra Janoary 2009 1 Lahatsoratra Tantara mikasika ny Sahara Andrefana 14 Desambra 2010
Sahara Andrefana: Mitarika resabe ny ampamoaka nataon'ny Wikileaks Mpanoratra Lina Ben Mhenni · Alzeria Mitohy mameno ny tontolon'ny fitorahana bilaogy ny fanehoan-kevitra nateraky ny telegrama diplaomatika naparitaky ny tranonkala Wikileaks. Niteraka fanamarihana vitsivitsy ny ampamoaka manodidina ny fifandirana ao Sahara Andrefana.
Sahara Andrefana: Voaroaka i Aminatou Haidar Mpanoratra Jillian C. York · Ady & Fifandirana Aminatou Haidar dia mafana fo lohalaharana amin'ny fitakiana ny fahaleovantenan'i Sahara Andrefana (avy any Maraoka). Ny Zoma 13 Novambra, raha niverina ho any Laayoune (tanàna iray any amin'ny faritr'i Sahara Andrefana), nosamborina izy ary noroahana noho izany. Manangona ny fanehoan-kevitra avy amin'ny mpitoraka blaogy rehetra i Jillian C..
07 Mey 2009
Bubisher: Boky maro eran'ny bus iray ho an'ireo ankizy any andrefan'i Sahara Andrefana Mpanoratra Renata Avila · Fanabeazana Bubisher..boky ho an’ireo ankizy any amin’ireo tobin’ny mpitsoa-ponenana any Sahara Andrefana Midika hoe “vorona milaza soa’ ny Bubisher .” Araka ny filazan'i Roge Blog, lohatenim- boky firaketana tononkalo sahraouie ihany koa izy io. Saingy ho an'ireo ankizy anjatony maro mipetraka ao amina toby natao ho an'ny mpitsoa-ponenana ao Sahara Andrefana,...
24 Febroary 2009
Maghreb: Nifampiresaka tamin’I Polisario ny solotenan’ny firenena mikambana mpiandraikitra an’i Sahara andrefana. Mpanoratra Jillian C. York · Alzeria Tonga tao Alzeria I Christopher Ross omaly, solotena manokana avy amin’ny firenena mikambana misahana ny raharaha Sahara andrefana, mba hifampireska amin’ny fiadidian’ny Polisario, araky AFP. Mamehy ny fihetsik'ireo mpitoraka blaogy manoloana ny faritry Maghreb momba ny fandrosoana faranay i Jillliana York.
22 Janoary 2009
Nakaton'i Maraoka ny ambasadiny any Caracas Mpanoratra Jillian C. York · Amerika Latina Nanambara i Maraoka tamin'ity herinandro ity fa hakatony ny ambasadiny any Venezoelà noho ny faneken'ity firenena ity an'i Repoblika Arabo Saharawi Demaokratika (SADR) ho firenena, Ilay faritra fantatra hoe “Sahara andrefana manko” die eo ambany fanapahan'i Maraoka. Firenena 48 no manaiky ny fijoroan'i SADR ary ny 13 amin'ireo dia manana...